ကမ္ဘာကျော်ဆရာတော်၏ ကမ္ဘာမကျော်သော အတွေးအခေါ်များ (၂၂) – ၀ီရသူ
သမဂ္ဂ ဟူသောစကားကို လူတိုင်ားကြားဖူးကြပေမည်။ ညီညွတ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၏။ ကိုယ်အားဖြင့် ညီညွတ်ခြင်း၊ စိတ်အားဖြင့် ညီညွတ်ခြင်း၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးစုံအားဖြင့် ညီညွတ်ခြင်းဟူ၍ ရှိရာတွင် လူစုံတက်စုံ အင်အားပြခြင်းကို ကာယသမဂ္ဂ(ကာယသာမဂ္ဂီ)၊ အမြင်တူညီခြင်း(သဘောထားမကွဲလွဲခြင်း)ကို စိတ္တသမဂ္ဂ (စိတ္တသာမဂ္ဂီ)၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံး ညီညွတ်ခြင်းကို ဥဘယသမဂ္ဂ(ဥဘယသာမဂ္ဂီ)ဟု ခေါ်ပါသည်။ သမဂ္ဂဆိုသည်မှာ အဖွဲ့အစည်းကိုဆိုလိုပြီး သာမဂ္ဂီဆိုသည်မှာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆိုလိုပေသည်။ ဤနေရာ၌ သမဂ္ဂစိတ်(အဖွဲ့အစည်းစိတ်)နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောလိုစိတ်ရှိပေသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့် အခြားဘာသာဝင်ဖြစ်လျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘက်မှ ရပ်တည်မည်၊ ဤသို့သောခံယူချက်မျိုးသည် ဘာသာသမဂ္ဂစိတ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားနှင့် နိုင်ငံသားပြဿနာဖြစ်လျှင် တိုင်းရင်းသားဘက်မှ ရပ်တည်မည်၊ ဤသို့သောခံယူချက်မျိုးသည် လူမျိုးသမဂ္ဂစိတ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား ပြဿနာဖြစ်လျှင် နိုင်ငံသားဘက်မှရပ်တည်မည်၊ ဤသို့သောခံယူချက်မျိုးသည် နိုင်ငံသားသမဂ္ဂစိတ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သံဃာအချင်းချင်း ဘုရားသားတော်အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းခြင်းသည် သံဃသမဂ္ဂစိတ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူသည် ဤသို့သောသမဂ္ဂစိတ်မျိုး ထားရှိသူဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူတို့ အမျိုးသားရေးသမားများတွင် သမဂ္ဂစိတ်မရှိသူ လွန်စွာနည်းပါးလှပေသည်။ ထို့ကြောင့် အခမ်းအနားမှာဖြစ်စေ အစည်းအဝေးမှာဖြစ်စေ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို ရှေ့တန်းမတင်ကြပေ။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးတလေ၏ ဟောပြောချက်၊ အပြုအမူတစ်ခုခုတွေ့ရလျှင်လည်း စိတ်ဝမ်းကွဲမည်စိုး၍ တုန့်ပြန်ရင်ဖွင့်ခြင်းမျိုး လုံးဝ မလုပ်ကြပေ။
စာရေးသူသည် သမဂ္ဂစိတ် အမြဲမွေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ မှန်သမျှ သည်းခံလေ့ရှိပါသည်။ မိမိနှင့် မိမိအဖွဲ့အစည်းအပေါ် မည်သို့ပင်ရန်ပြုနေသူဖြစ်ပါစေ အန္တရာယ်ပေါ်ပေါက်လာလျှင် ဘုရားသားတော်အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းတတ်ပါသည်။ မဘသညီလာခံကြီး ကျင်းပနေချိန်တွင် အဆိုပါညီလာခံကြီးပျက်ပြားအောင် သတင်းမီဒီယာအားကိုး၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ မီဒီယာများ အကြိုက်တွေ့ကာ ညီလာခံသတင်းမရေးတော့ဘဲ ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ သတင်းများကိုသာ မျက်နှာဖုံးတင်၍ ရေးသားကြပေတော့၏။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် မဘသညီလာခံသတင်းများ မှေးမှိန်သွားခဲ့ရပေသည်။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် ညီလာခံဖိတ်စာမရခြင်း၊ ညီလာခံတက်ခွင့်မရခြင်း၊ နေရာမရခြင်းတို့ကြောင့် ပတ်မကြီးထိုးဖောက်ဗျူဟာနှင့် သဲပက်ဗျူဟာကို ကျင့်သုံးသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ သူ၏စွပ်စွဲချက်များကို ဆရာတော်သံဃာတော်များက သည်းခံနိုင်ကြသော်လည်း စာရေးသူက သည်းမခံနိုင်ဖြစ်ကာ ဖေ့စ်ဘုတ်မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ချေပခြင်းဖြင့် စာရေးသူနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့သည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပေသည်။ နောင်အခါ ထိုပုဂ္ဂိုလ် လူဝတ်လဲကာ ထောင်ချခံရလေသည်။ ထိုအခါ စာရေးသူက ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှ ရပ်တည်ကာ အစိုးရကို ပြန်လည်ခုခံပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်းသို့ ဦးစွာသွားကာ ငွေလှူခြင်း၊ အားပေးစကားပြောခြင်း၊ နှစ်သိမ့်သြဝါဒပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပေသည်။ သံဃာနှင့် အစိုးရ ထိပ်တိုက်တွေ့လျှင် သံဃာဘက်မှ ရပ်တည်မည်ဟူသော သမဂ္ဂစိတ်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ထိုပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ညီအစ်ကိုအရင်းပမာ လက်တွဲလုပ်ဆောင်လျက် ရှိပေသည်။
စာရေးသူအပေါ်မှာရော စာရေးသူတို့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် မဘသအပေါ်မှာပါ လုံးဝ မကောင်းခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးလည်း ရှိခဲ့ဖူးပေသည်။ ဒေါက်တာဘွဲ့ရ ရဟန်းပျိုတစ်ပါးပင်။ စာရေးသူအောက် အနည်းငယ် သိက္ခာငယ်ပါသည်။ လူချင်းရင်းနီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြသော်လည်း နိုင်ငံရေးသွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုကြောင့် စာရေးသူအပေါ် အကောင်းမမြင်ပါ။ သူ၏အကောင့်တွင် စာရေးသူမကောင်းကြောင်း အမြဲတန်း ရေးလျက် တင်လျက် ရှိပေသည်။ စာရေးသူကို သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ငေါက်လွှတ်သည့်ပုံစံမျိုးထိ လုပ်ဇာတ်ခင်း၍ ရေးသားတတ်သလို အစ်နေ့အမဲသားဝေသည့်အခါ လာရောက်ယူကြသော လူတန်းကြီးပုံကိုသုံးလျက် “ငါတို့အရိုး စည်းရိုးထိုးသည့်သူတွေ”ဟုဆိုကာ မဘသအဖွဲ့အစည်းကြီးကို ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေသည်။ စာ သီတဂူဆရာတော်ကြီးက စာရေးသူအပေါ် ဘယ်လိုအားထားကြောင်း အထောက်အထားနှင့် စာရေးသူက ပြန်လည်ချေပကာ သူ၏ပို့စ်ကို ပြန်ဖြုတ်ခိုင်းပြီး တောင်းပန်စာ ရေးခိုင်းသည့်အခါ မလိုက်နာဘဲ လျှောချသွားပေသည်။ စာရေးသူနှင့်တွေ့လျှင် စာရေးသူရှေ့မှာ မခုတ်တတ်သည့်ကြောင်ကလေးလို ခပ်ကုပ်ကုပ်လေး နေထိုင်တတ်ပြီး နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်တွေ့လျှင် စာရေးသူမကောင်းကြောင်း အမြဲပြောကာ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တွင် စာရေးသူကို အမြဲတိုက်ခိုက်လေ့ရှိပေသည်။ စာရေးသူနှင့် ဖုန်းပြောသည့်အခါလည်း ရိုရိုကျိုးကျိုးပင်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူက စာရေးသူ၏အကောင့်တွင် “ဓမ္မဝါးတင်းအခြောက်ကြီး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြင်းထန်စွာ တုန့်ပြန်ခဲ့ရလေသည်။
တစ်နေ့သောအခါ စာရေးသူအား အနီးနေတပည့်လေးတစ်ပါးက လျှောက်ထားလာ၏။ ဓမ္မဝါးတင်းဆရာတော်သတင်းကို မာတုဂါမတစ်ဦးက ပေးပို့လာသော ဆို၏။ ထိုအမျိုးသမီးကိုယ်တိုင် ဓမ္မဝါးတင်းဆရာတော်၏ အဓမ္မကျင့်ခြင်းကို ခံလိုက်ရသော ဟူ၏။ အထောက်အထားရှိလျှင် ပို့ပေးပါဟု ပြန်လည်ခိုင်းစေလိုက်ရ၏။ အမှုဖြစ်ပွားသည်ကား အမှန်ပင်။ သို့သော် တစ်ဖက်သတ်လုပ်လျှင်လည်း မပြည့်စုံနိုင်၊ ဓမ္မဝါးတင်းဆရာတော်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လျှင်လည်း မသင့်လျော်သဖြင့် နိုင်ငံခြားမှာနေသော အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးကို အကူအညီတောင်းလိုက်ရတော့၏။ ထိုအမျိုးသမီးကြီးသည် ထိုဆရာတော်လေးအား သားတစ်ဦးပမာ စောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့နေသူဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူနှင့်လည်း ဆရာဒကာဆက်ဆံရေးရှိသူဖြစ်ပါသည်။ ထိုအမျိုးသမီးကြီးက ခါးသီးစွာ ငြင်းပါသည်။ စွပ်စွဲသူမကို သိရှိကြောင်း တွင်တွင်ပြောလေသည်။ ထိုနေ့မှာပင် ဓမ္မဝါးတင်းက စာရေးသူထံ ဆက်သွယ်လာပါသည်။ ၎င်းနှင့် ပြောဆိုတိုင်းလည်း အသံဖမ်းထားပါသည်။ စောဒက စုဒိတက (စွပ်စွဲသူနှင့် စွပ်စွဲခံရသူ) နှစ်ဦးလုံး၏ စကားများကို နားထောင်ပြီးသည့်အခါ အမှုသွားအမှုလာကို တီးခေါက်မိသွားပါသည်။ သို့သော် မပြည့်စုံသေးပါ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့နှင့် စပ်ဆက်သမျှထံ စုံစမ်းလေ့လာရပါတော့သည်။ ထိုအခါမှသာ လုံးဝဥဿုံ အလုံးစုံ ပြည့်စုံသွားလေ၏။
ဓမ္မဝါးတင်းဆရာတော်က မလေးရှားမှာ နေသည်။ အမျိုးသမီးကလည်း မလေးရှားမှာပင်။ အိမ်ထောင်ရှိသည်။ ကလေးနှစ်ယောက်ရှိသည်။ ခင်ပွန်းသည်က မြန်မာစကားမပြောတတ်သည့် ပြည်ကြီးတရုတ်ဖြစ်သည်။ ရုံးပိတ်ရက်မှာသာ မိသားစုနှင့် အတူနေရ၏။ ကျန်ရက်များမှာ ဓမ္မဝါးတင်းထံမှာပဲ အမြဲရှိသည်။ မလေးရှားရောက် ရွှေမြန်မာများက ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ထိုသားအမိကို သဘောမကျကြ။ ဘုန်းကြီးကိုလျှောက်ထားသော်လည်း မရ။ မာတုဂါမကို ပြောဆို၍လည်း မရ။ ဤသို့ဖြင့် အကြင်လင်မယားအဆင့်သို့ ရောက်ရှိကြလေသည်။ တိတ်ပုန်း ကြိတ်လုံး လင်မယားတည်း။
ဓမ္မဝါးတင်း ရန်ကုန်ပြန်လာသည်။ ကျောင်းတွေထောင်၊ သင်တန်းတွေဖွင့်သည်။ သူတို့ချင်း အဆက်အသွယ်ရှိကြသည်။ နှစ်အတန်ကြာသည့်အခါ ဓမ္မဝါးတင်းက အခြားတစ်ဦးနှင့် ပြောင်းတွဲသည်။ မလေးရှားသူ သိသွားသည်။ ဖြတ်ခိုင်းသော်လည်း မရ။ မလေးရှားသူက ဓမ္မဝါးတင်းနှင့် လက်ထပ်ကြဖို့အထိ အားခဲထားသည်။ တရုတ်ကြီး ပြည်တော်ပြန်သွားလျှင် ကလေးနှင့် စည်းစိမ် ကျန်ခဲ့မည်။ ထိုအခါ ဓမ္မဝါးတင်းနှင့်အတူ နေမည်။ ဤမျှထိ စိတ်ကူးယဉ်ထားသည်။ ယခုကား အိပ်မက်တွေ ပျက်ပြယ်သွားခဲ့ပြီ။ အိမ်မှာအတူနေခဲ့ခြင်းမဟုတ်သဖြင့်လည်း အထောက်အထားမရှိ။ ထိုအခါ မာယာသုံးရသည်။ ရန်ကုန်ပြန်လာသည်။ တည်းခိုခန်းမှာသာ နေသည်။ သူ့မောင်တော်ကို လှမ်းခေါ်သည်။ စားနေကျကြောင်ဖားက တစ်ကိုယ်တည်းလာသည်။ အခန်းထဲမှာ ဧကော ဧကာယ (နှစ်ကိုယ်တည်း)နေသည်။ နှမတော်က အလိမ္မာသုံးသည်။ မောင်တော်က အဟုတ်ထင်ပြီး တကယ်လုပ်သည်။ မောင်တော်ရေချိုးနေစဉ် သင်္ကန်းများယူကာ ထွက်ပြေးသွားပါတော့သည်။ ဥဒေါင်းမင်း ကျော့ကွင်းမိသွားတော့၏။ ဝတ်စရာ ဘာမျှမရှိတော့သဖြင့် မွေ့ရာပေါ်မှ စောင်အဖြူကြီးကို သင်္ကန်းလိုရုံကာ ထွက်ပြေးခဲ့ရလေတော့၏။ ထိုအခါမှ ကာမဂုဏ် ချိုမြိန်မှန်း သိသွားပုံရလေသည်။ ထိုနေ့မှာပင် ဓမ္မဝါးတင်းက သံဃနာယကရုံး လာရ၏။ မာတုဂါမက အသင့်ရောက်နေလေသည်။ အထောက်အထားအားလုံး ခိုင်လုံနေ၍ သံဃနာယကက ဆရာတော်များရှေ့မှောက်မှာ လူဝတ်လဲခဲ့ရတော့၏။ မာတုဂါမကျေနပ်သွားသည်။ မလေးရှားပြန်သွားသည်။ နှစ်အတန်ကြာသည့်အခါ ဓမ္မဝါးတင်း သင်တန်းပို့ချနေသည့် သတင်းများ ပြန်လည်တွေ့ရှိရသည်။ လူထွက်ဖို့ (လူထွက်ပြီး သူမကိုယူဖို့) အကြိမ်ကြိမ်ပြောသော်လည်း မရသဖြင့် တရားစွဲဖို့ ပြင်ဆင်ရသည်အထိ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
စာရေးသူနှင့် ဓမ္မဝါးတင်းဆက်ဆံရေးအနေအထားကို သိရှိသွားသဖြင့် စာရေးသူထံ အကူအညီတောင်းခြင်း ဖြစ်ပေမည်။ နိုင်ငံရေးဘုန်းကြီးဆိုလျှင် ဤပြဿနာသည် ဧရာမအကွက်ကြီး ဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။ ဘုရားမျက်နှာမျှမထောက် အားရဝမ်းသာ ဖွကြ ဆွကြပေလိမ့်မည်။ စာရေးသူမှာကား သမဂ္ဂစိတ်အပြည့်အဝရှိသဖြင့် ရုံးရောက်ဂတ်ရောက် အဖြစ်မခံပေ။ မောင်တော် နှမတော် ပြန်ညှိခိုင်း၏။ လုံးဝ မညှိနှိုင်းကြ။ နှမတော်က ဆိုလာသည်မှာ “အနိုင်ကျင့်ခံရသည်ကို စိတ်မဆိုးကြောင်း၊ သူ့ကို ထောင်လဲမချချင်ကြောင်း၊ လူထွက်လျှင် ကျေနပ်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီလိုပဲဆက်နေနေလျှင် ထေရဝါဒသာသနာ မသန့်ရှင်းနိုင်ကြောင်း”ပင်။ တစ်ဖက်သတ်နားထောင်လျှင်ကား လေးစားဖွယ်၊ ကရုဏာသက်ဖွယ် စကားများပင်တည်း။
ဤအမှုလိုင်းပေါ်တက်မှာ ကြောက်ပါသည်။ အမဲအကြိုက်၊ အရဲအကြိုက် ဖြစ်သွားပေတော့မည်။ သူတစ်ပါးအတွက် သာသနာတော်တစ်ရပ်လုံး မျက်နှာပျက်စရာ အရှက်ရစရာ ကြုံရနိုင်သောကြောင့်တည်း။ ထို့ကြောင့် မောင်တော်ထံ ဖုန်းဆက်၍ ပြန်ချော့ထားဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့သလို နှမတော်ကိုလည်း နှစ်သိမ့်ပေးကာ အချိန်ဆွဲထားရလေသည်။ မကြာပါ။ နှမတော်က လူပျံကျော်တစ်ပါးနှင့် အဆက်အသွယ်ရသွားကာ အမှုတွဲကို ကမ္ဘာအေးထိ အရောက်ပို့နိုင်သွားခဲ့ပေသည်။ ရဲစခန်းမှာလည်း တိုင်ချက်ဖွင့်ထားသောဟူ၏။
မောင်တော်က စာရေးသူထံ ဖုန်းဆက်လာ၏။ တင်ပေး တိုင်ပေးသူကို အပြစ်တင်၏။ စာရေးသူလိုလုပ်ရမည်၊ တစ်ဖက်သတ်မလုပ်သင့်ဟု ဝေဖန်နေလေသည်။ စာရေးသူထံ မကြာခဏဖုန်းဆက်ကာ အကြံဉာဏ်တောင်းလေသည်။ စာရေးသူက လိုလိုလားလား အကြံပေးခြင်း၊ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးရှင်းပြခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးဇူးစကား အမြဲဆိုပါသည်။ “ဦးဇင်းရေ ဦးဇင်းရဲ့ သမဂ္ဂစိတ်ကိုတော့ မလေးစားဘဲကို မနေနိုင်တော့တာပါ။ အရင်တုန်းက ကိစ္စတွေအတွက်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်”ဟု လှိုက်လှဲစွာ တောင်းပန်သွားပေသည်။
မောင်တော်ပျောက်ချက်သားကောင်းသွားသဖြင့် စာရေးသူလည်း ဝမ်းသာနေလေသည်။ အကြောင်းမှာ ဇာတ်မြှုပ်ပြီးနေဖို့ စာရေးသူက အကြံပြုထားသောကြောင့်တည်း။ သို့သော် မကြာလိုက်ပါ။ တီဗီသတင်းနှင့်အတူ မောင်တော်သတင်းကို သာဝန်ကိုယ်တိုင် ဖွင့်ဟပြောချသည်နှင့် ကြုံလိုက်ရတော့၏။ အဓမ္မကျင့်သည်ထင်ကာ “အတော်ဆိုးတယ်”ဟု မီဒီယာမှာ သာဝန်က ထုတ်ပြောသည်ကိုထောက်လျှင် သာဝန်ကိုယ်တိုင် တစ်ဖက်သတ်စွပ်စွဲနေမှန်း သိသာထင်ရှားပေသည်။ ထိုအခါမှ မောင်တော်အဖမ်းခံထားရမှန်း သိရှိခဲ့ရလေသည်။ စိတ်မကောင်းပါ။ သာသနာတစ်ရပ်လုံး ထိခိုက်လာတော့မည်ဖြစ်၍ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရပေသည်။ ထင်သည့်အတိုင်းပင် နှမတော်ထံမှ အထောက်အထားများ လိုင်းပေါ်မှာ ဂယက်ရိုက်နေပေတော့၏။ အနီဘုန်းကြီးဖြစ်နေ၍ တော်ပါသေးသည်။ မျိုးချစ်ရဟန်းတော်တစ်ပါးဆိုလျှင် မျက်စိရော နားပါ ပိတ်ထားရမည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပေသည်။
၎င်းအမှု မုဒိမ်းမှုမမြောက်ပါ။ သာသနာညှိုးနွမ်းအမှုဖြင့်သာ ၂၉၅ပုဒ်မ တပ်နိုင်ပါသည်။ အလိ်ုတူသောကြောင့်တည်း။ စာရေးသူက ရဟန်းအချင်းချင်းဖြစ်၍ စောင့်ထိန်းပါသည်။ မယုတ်မလွန်သာ အကြံပြုပါသည်။ “လွှဲစရာရှိတာ လွှဲထားလိုက်တော့၊ လူထွက်သင့်ရင် ထွက်လိုက်တော့၊ မထွက်ဘဲနေချင်ရင်လည်း ဇာတ်မြှုပ်ပြီးနေလိုက်တော့၊ ကိုယ်ထင်လည်း မပြမိစေနဲ့” သူကလည်း သဘောတူပါသည်။ အိန္ဒိယမှာပဲ နေတော့မည်ဟု ဆိုလာ၏။ ကောင်းသည်ဟု ထောက်ခံချက်ပေးလိုက်၏။ အကြာကြီးပျောက်သွားပြီးမှ ဘာကြောင့်အဖမ်းခံလိုက်ရသည်ကိုတော့ မသိရှိတော့ပါ။ တရားရုံးလာတိုင်း သတင်းတွေ တက်မလာသည်ကိုပင် ကျေးဇူးတင်မိနေပေသည်။
အကယ်၍သာ စာရေးသူနှင့် ဓမ္မဝါးတင်းနေရာချင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့သော် ဓမ္မဝါးတင်းက စာရေးသူလို သမဂ္ဂစိတ် မွေးမြူနိုင်ပါမည်လော။ မထင်ပါ။ လုံးဝ မထင်ပါ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာ မြှောက်စားခံထားရသည့် ဘုန်းကြီးတွေရင်ထဲ သမဂ္ဂစိတ်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ရဟန်းအချင်းချင်း ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်နေကြပါသည်။ ထေရ်ကြီးဝါကြီး ဆရာတော်ကြီးများကိုပင် ချမ်းသာမပေးကြပါ။ မီဒီယာရှေ့မှာ မဆိုထားဘိ ဘာသာခြားများရှေ့မှာပင် ဘုန်းကြီးမကောင်းကြောင်း ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဟောပြောနေကြပေသည်။ ရဟန်းတစ်ပါးကို နိုင်ငံခြားသားသတင်းသမားများက မတရားအနိုင်ကျင့် လုပ်ကြံထုတ်လွှင့်နေသည်ကိုကြည့်၍ ကိုယ့်ဘက်က နာရကောင်းမှန်းမသိဘဲ ဟားတိုက်လှောင်ပြောင်နေကြသူများကို တွေ့ရှိရပေသည်။ ရဟန်းတစ်ပါးကို ထောင်ကျစေချင်၍ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ပေါင်းကာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်သူများ၊ ရပ်ထဲရွာထဲ လက်မှတ်လိုက်ကောက်နေသူများပင် ရှိပါသည်။ အချို့ဆိုလျှင် ဖမ်းမိစေရန် ဝိုင်းကူဖမ်းပေးနေသည်များပင် ရှိပေသည်။ စာမတတ် ပေမတတ် သူငယ်နှပ်စားလေးများ ထိုသို့လုပ်သည်ကို နားလည်ပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း မဝတီဘုန်းကြီးလို စာတတ်ပေတတ် ကျမ်းဂန်တတ် ထေရ်ကြီးဝါကြီးက ထိုသို့ပြုမူနေသည်ကို အံ့သြခဲ့ရလေသည်။ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသားတော်များ မဟုတ်ကြလေရော့သလော၊ သို့တည်းမဟုတ် စောင့်ထိန်းစရာမရှိတော့လောက်အောင် ရဟန်းသိက္ခာပျက်စီးနေရော့သလော၊ သို့တည်းမဟုတ် ဘုန်းကြီးဘဝနှင့် မထိုက်တန်တော့လောက်အောင် ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ပျက်ပြားနေရော့သလော၊ သို့တည်းမဟုတ် မပြောသင့်မပြောထိုက် မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်မှန်း မသိနိုင်လောက်အောင် အသိတရားတွေ ခေါင်းပါးကုန်ရော့သလော ၎င်းတို့သာ သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပေတော့သတည်း။ ဘုရားရှင်မျက်နှာ သာသနာတော်မျက်နှာတော့ ကြည့်ဖို့ကောင်းလှ၏။ ပါတီဆိုသည်မှာ ယာယီသာဖြစ်သည်။ သာသနာတော်ကမှ ထာဝရဖြစ်သည်။ ဤသို့သော အမြင်မျိုး ရှိပုံမရ။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ပါတီစွဲဖြင့် ဘုရားသားတော်အချင်းချင်း ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်နေသည်မှာ တော်တန်ရုံ မိုက်မဲသူများပင် မကျူးလွန်ဝံ့သည့် ယုတ်မာမှုမျိုးပင် ဖြစ်ပေသည်။ ရှက်ဖွယ်အတိပင်။
ခုဒ္ဒကနိကာယ် ဣတိဝုတ်ပါဠိတော် သံဃသာမဂ္ဂီသုတ်မှာ မြတ်စွာဘုရားက ဤသို့ဤပုံ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
ဧကဓမ္မော ဘိက္ခဝေ လောကေ ဥပ္ပဇ္ဇမာနော ဥပ္ပဇ္ဇတိ ဗဟုဇနဟိတာယ ဗဟုဇနသုခါယ ဗဟူနော ဇနဿ အတ္ထာယ ဟိတာယ သုခါယ ဒေဝမနုဿာနံ။ ကတမော ဧကဓမ္မော? သံဃသာမဂ္ဂီ။
ရဟန်းတို့ သံဃာညီညွတ်ခြင်းတည်းဟူသော တစ်ခုသောတရား ထွန်းကားလတ်သော် လူနတ်များစွာ သတ္တဝါအပေါင်း ချမ်းသာရာချမ်းသာကြောင်း ဖြစ်လေသတည်း။
(ဣတိဝုတ်။ ၂၀၃။ သျ။ ၁၇။)
သံဃာညီညွတ်ရေးကို ရှေးရှု၍ အမြင်မတူသော်လည်း အောင့်အီးသည်းခံရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ တရားနည်းလမ်းကျ ဝေဖန်ခြင်းကို ဘုရားခွင့်ပြုထားပါသည်။ နိုင်ငံရေးဘုန်းကြီးများသည် ဝေဖန်ရေးထက် စွပ်စွဲစော်ကားရေး ပြစ်မှားကျူးလွန်ရေးကို အားသန်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ဆိုလျှင် မဟာနာယကဆရာတော်ကြီးများကိုပင် စိန်ခေါ်နေကြသည်။ ပရိသတ်မပါဘဲ အလွတ်တန်းရင်ဖွင့်သည်က သင့်လျော်သော်လည်း ပရိသတ်ရှေ့ ဓမ္မာသနပလ္လင်ထက်မှ လက်သီးလက်မောင်းတန်း၍ လူမိုက်ဆန်စွာ စိန်ခေါ်နေသည်မှာ မကြားဝံ့ မမြင်သာ ဖြစ်နေပေသည်။ သံဃာအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နေမှ နိုင်ငံရေးသူရဲကောင်းဟု ထင်မှတ်နေကြသည်လော မပြောသာတော့ပေ။
စာရှုသူအားလုံး သမဂ္ဂစိတ်ထား မွေးမြူနိုင်ကြပါစေသော်…ဝ်။
ကမ်ဘာကြျောဆရာတျော၏ ကမ်ဘာမကြျောသော အတှေးအချေါမြား (၂၂)
သမဂ်ဂ ဟူသောစကားကို လူတိုငျားကွားဖူးကွပမေညျ။ ညီညှတျခွငျးဟု အဓိပ်ပါယျရ၏။ ကိုယျအားဖွငျ့ ညီညှတျခွငျး၊ စိတျအားဖွငျ့ ညီညှတျခွငျး၊ ကိုယျစိတျနှဈပါးစုံအားဖွငျ့ ညီညှတျခွငျးဟူ၍ ရှိရာတှငျ လူစုံတကျစုံ အငျအားပွခွငျးကို ကာယသမဂ်ဂ(ကာယသာမဂ်ဂီ)၊ အမွငျတူညီခွငျး(သဘောထားမကှဲလှဲခွငျး)ကို စိတ်တသမဂ်ဂ (စိတ်တသာမဂ်ဂီ)၊ ကိုယျစိတျနှဈပါးလုံး ညီညှတျခွငျးကို ဥဘယသမဂ်ဂ(ဥဘယသာမဂ်ဂီ)ဟု ချေါပါသညျ။ သမဂ်ဂဆိုသညျမှာ အဖှဲ့အစညျးကိုဆိုလိုပွီး သာမဂ်ဂီဆိုသညျမှာ အဖှဲ့အစညျးမြား၏ လုပျဆောငျခကျြကို ဆိုလိုပသေညျ။ ဤနရော၌ သမဂ်ဂစိတျ(အဖှဲ့အစညျးစိတျ)နှငျ့ ပတျသကျ၍ ပွောလိုစိတျရှိပသေညျ။
ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျနှငျ့ အခွားဘာသာဝငျဖွဈလြှငျ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျဘကျမှ ရပျတညျမညျ၊ ဤသို့သောခံယူခကျြမြိုးသညျ ဘာသာသမဂ်ဂစိတျပငျ ဖွဈပါသညျ။ တိုငျးရငျးသားနှငျ့ နိုငျငံသားပွဿနာဖွဈလြှငျ တိုငျးရငျးသားဘကျမှ ရပျတညျမညျ၊ ဤသို့သောခံယူခကျြမြိုးသညျ လူမြိုးသမဂ်ဂစိတျပငျ ဖွဈပါသညျ။ နိုငျငံသားနှငျ့ နိုငျငံခွားသား ပွဿနာဖွဈလြှငျ နိုငျငံသားဘကျမှရပျတညျမညျ၊ ဤသို့သောခံယူခကျြမြိုးသညျ နိုငျငံသားသမဂ်ဂစိတျပငျ ဖွဈပါသညျ။ သံဃာအခငျြးခငျြး ဘုရားသားတျောအခငျြးခငျြး ရိုငျးပငျးခွငျးသညျ သံဃသမဂ်ဂစိတျပငျ ဖွဈပါသညျ။ စာရေးသူသညျ ဤသို့သောသမဂ်ဂစိတျမြိုး ထားရှိသူဖွဈပါသညျ။ စာရေးသူတို့ အမြိုးသားရေးသမားမြားတှငျ သမဂ်ဂစိတျမရှိသူ လှနျစှာနညျးပါးလှပသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ အခမျးအနားမှာဖွဈစေ အစညျးအဝေးမှာဖွဈစေ ပုဂ်ဂိုလျရေးကို ရှတေ့နျးမတငျကွပေ။ ပုဂ်ဂိုလျတဈပါးတလေ၏ ဟောပွောခကျြ၊ အပွုအမူတဈခုခုတှရေ့လြှငျလညျး စိတျဝမျးကှဲမညျစိုး၍ တုနျ့ပွနျရငျဖှငျ့ခွငျးမြိုး လုံးဝ မလုပျကွပေ။
စာရေးသူသညျ သမဂ်ဂစိတျ အမွဲမှေးပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးရာ မှနျသမြှ သညျးခံလရှေိ့ပါသညျ။ မိမိနှငျ့ မိမိအဖှဲ့အစညျးအပျေါ မညျသို့ပငျရနျပွုနသေူဖွဈပါစေ အန်တရာယျပျေါပေါကျလာလြှငျ ဘုရားသားတျောအခငျြးခငျြး ရိုငျးပငျးတတျပါသညျ။ မဘသညီလာခံကွီး ကငျြးပနခြေိနျတှငျ အဆိုပါညီလာခံကွီးပကျြပွားအောငျ သတငျးမီဒီယာအားကိုး၍ လုပျဆောငျခဲ့သော ဘုနျးကွီးတဈပါး ပျေါပေါကျခဲ့ဖူးပါသညျ။ မီဒီယာမြား အကွိုကျတှကေ့ာ ညီလာခံသတငျးမရေးတော့ဘဲ ထိုပုဂ်ဂိုလျ၏ သတငျးမြားကိုသာ မကျြနှာဖုံးတငျ၍ ရေးသားကွပတေော့၏။ ပုဂ်ဂိုလျတဈဦးတဈယောကျ၏ နှောငျ့ယှကျဖကျြဆီးမှုကွောငျ့ မဘသညီလာခံသတငျးမြား မှေးမှိနျသှားခဲ့ရပသေညျ။ အဆိုပါပုဂ်ဂိုလျသညျ ညီလာခံဖိတျစာမရခွငျး၊ ညီလာခံတကျခှငျ့မရခွငျး၊ နရောမရခွငျးတို့ကွောငျ့ ပတျမကွီးထိုးဖောကျဗြူဟာနှငျ့ သဲပကျဗြူဟာကို ကငျြ့သုံးသှားခဲ့ခွငျး ဖွဈပသေညျ။ သူ၏စှပျစှဲခကျြမြားကို ဆရာတျောသံဃာတျောမြားက သညျးခံနိုငျကွသျောလညျး စာရေးသူက သညျးမခံနိုငျဖွဈကာ ဖစျေ့ဘုတျမှတဈဆငျ့ ပွနျလညျခပြေခွငျးဖွငျ့ စာရေးသူနှငျ့ ထိပျတိုကျတှသေ့ညျ့အဆငျ့သို့ ရောကျရှိသှားခဲ့ပသေညျ။ နောငျအခါ ထိုပုဂ်ဂိုလျ လူဝတျလဲကာ ထောငျခခြံရလသေညျ။ ထိုအခါ စာရေးသူက ထိုပုဂ်ဂိုလျဘကျမှ ရပျတညျကာ အစိုးရကို ပွနျလညျခုခံပေးခဲ့ပါသညျ။ ထိုပုဂ်ဂိုလျကြောငျးသို့ ဦးစှာသှားကာ ငှလှေူခွငျး၊ အားပေးစကားပွောခွငျး၊ နှဈသိမျ့သွဝါဒပေးခွငျးမြား ပွုလုပျခဲ့ပသေညျ။ သံဃာနှငျ့ အစိုးရ ထိပျတိုကျတှလြေှ့ငျ သံဃာဘကျမှ ရပျတညျမညျဟူသော သမဂ်ဂစိတျကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။ ယခုအခါ ထိုပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ ညီအဈကိုအရငျးပမာ လကျတှဲလုပျဆောငျလကျြ ရှိပသေညျ။
စာရေးသူအပျေါမှာရော စာရေးသူတို့အဖှဲ့အစညျးဖွဈသညျ့ မဘသအပျေါမှာပါ လုံးဝ မကောငျးခဲ့သညျ့ ပုဂ်ဂိုလျတဈပါးလညျး ရှိခဲ့ဖူးပသေညျ။ ဒေါကျတာဘှဲ့ရ ရဟနျးပြိုတဈပါးပငျ။ စာရေးသူအောကျ အနညျးငယျ သိက်ခာငယျပါသညျ။ လူခငျြးရငျးနီးကြှမျးဝငျခဲ့ကွသျောလညျး နိုငျငံရေးသှေးထိုးလှုံ့ဆျောမှုကွောငျ့ စာရေးသူအပျေါ အကောငျးမမွငျပါ။ သူ၏အကောငျ့တှငျ စာရေးသူမကောငျးကွောငျး အမွဲတနျး ရေးလကျြ တငျလကျြ ရှိပသေညျ။ စာရေးသူကို သီတဂူဆရာတျောကွီးက ငေါကျလှတျသညျ့ပုံစံမြိုးထိ လုပျဇာတျခငျး၍ ရေးသားတတျသလို အဈနအေ့မဲသားဝသေညျ့အခါ လာရောကျယူကွသော လူတနျးကွီးပုံကိုသုံးလကျြ “ငါတို့အရိုး စညျးရိုးထိုးသညျ့သူတှေ”ဟုဆိုကာ မဘသအဖှဲ့အစညျးကွီးကို ထိုးနှကျတိုကျခိုကျခဲ့ပသေညျ။ စာ သီတဂူဆရာတျောကွီးက စာရေးသူအပျေါ ဘယျလိုအားထားကွောငျး အထောကျအထားနှငျ့ စာရေးသူက ပွနျလညျခပြေကာ သူ၏ပို့ဈကို ပွနျဖွုတျခိုငျးပွီး တောငျးပနျစာ ရေးခိုငျးသညျ့အခါ မလိုကျနာဘဲ လြှောခသြှားပသေညျ။ စာရေးသူနှငျ့တှလြေှ့ငျ စာရေးသူရှမှေ့ာ မခုတျတတျသညျ့ကွောငျကလေးလို ခပျကုပျကုပျလေး နထေိုငျတတျပွီး နိုငျငံရေးသမားမြားနှငျ့တှလြေှ့ငျ စာရေးသူမကောငျးကွောငျး အမွဲပွောကာ ဖစျေ့ဘုတျပျေါတှငျ စာရေးသူကို အမွဲတိုကျခိုကျလရှေိ့ပသေညျ။ စာရေးသူနှငျ့ ဖုနျးပွောသညျ့အခါလညျး ရိုရိုကြိုးကြိုးပငျ။ ထို့ကွောငျ့ စာရေးသူက စာရေးသူ၏အကောငျ့တှငျ “ဓမ်မဝါးတငျးအခွောကျကွီး” ခေါငျးစဉျဖွငျ့ ပွငျးထနျစှာ တုနျ့ပွနျခဲ့ရလသေညျ။
တဈနသေ့ောအခါ စာရေးသူအား အနီးနတေပညျ့လေးတဈပါးက လြှောကျထားလာ၏။ ဓမ်မဝါးတငျးဆရာတျောသတငျးကို မာတုဂါမတဈဦးက ပေးပို့လာသော ဆို၏။ ထိုအမြိုးသမီးကိုယျတိုငျ ဓမ်မဝါးတငျးဆရာတျော၏ အဓမ်မကငျြ့ခွငျးကို ခံလိုကျရသော ဟူ၏။ အထောကျအထားရှိလြှငျ ပို့ပေးပါဟု ပွနျလညျခိုငျးစလေိုကျရ၏။ အမှုဖွဈပှားသညျကား အမှနျပငျ။ သို့သျော တဈဖကျသတျလုပျလြှငျလညျး မပွညျ့စုံနိုငျ၊ ဓမ်မဝါးတငျးဆရာတျောနှငျ့ တိုကျရိုကျဆကျသှယျလြှငျလညျး မသငျ့လြျောသဖွငျ့ နိုငျငံခွားမှာနသေော အမြိုးသမီးကွီးတဈဦးကို အကူအညီတောငျးလိုကျရတော့၏။ ထိုအမြိုးသမီးကွီးသညျ ထိုဆရာတျောလေးအား သားတဈဦးပမာ စောငျ့ရှောကျထောကျပံ့နသေူဖွဈပါသညျ။ စာရေးသူနှငျ့လညျး ဆရာဒကာဆကျဆံရေးရှိသူဖွဈပါသညျ။ ထိုအမြိုးသမီးကွီးက ခါးသီးစှာ ငွငျးပါသညျ။ စှပျစှဲသူမကို သိရှိကွောငျး တှငျတှငျပွောလသေညျ။ ထိုနမှေ့ာပငျ ဓမ်မဝါးတငျးက စာရေးသူထံ ဆကျသှယျလာပါသညျ။ ၎င်းငျးနှငျ့ ပွောဆိုတိုငျးလညျး အသံဖမျးထားပါသညျ။ စောဒက စုဒိတက (စှပျစှဲသူနှငျ့ စှပျစှဲခံရသူ) နှဈဦးလုံး၏ စကားမြားကို နားထောငျပွီးသညျ့အခါ အမှုသှားအမှုလာကို တီးခေါကျမိသှားပါသညျ။ သို့သျော မပွညျ့စုံသေးပါ။ ထို့ကွောငျ့ ၎င်းငျးတို့နှငျ့ စပျဆကျသမြှထံ စုံစမျးလလေ့ာရပါတော့သညျ။ ထိုအခါမှသာ လုံးဝဥဿုံ အလုံးစုံ ပွညျ့စုံသှားလေ၏။
ဓမ်မဝါးတငျးဆရာတျောက မလေးရှားမှာ နသေညျ။ အမြိုးသမီးကလညျး မလေးရှားမှာပငျ။ အိမျထောငျရှိသညျ။ ကလေးနှဈယောကျရှိသညျ။ ခငျပှနျးသညျက မွနျမာစကားမပွောတတျသညျ့ ပွညျကွီးတရုတျဖွဈသညျ။ ရုံးပိတျရကျမှာသာ မိသားစုနှငျ့ အတူနရေ၏။ ကနျြရကျမြားမှာ ဓမ်မဝါးတငျးထံမှာပဲ အမွဲရှိသညျ။ မလေးရှားရောကျ ရှမွေနျမာမြားက ကြောငျးအိပျကြောငျးစား ထိုသားအမိကို သဘောမကကြွ။ ဘုနျးကွီးကိုလြှောကျထားသျောလညျး မရ။ မာတုဂါမကို ပွောဆို၍လညျး မရ။ ဤသို့ဖွငျ့ အကွငျလငျမယားအဆငျ့သို့ ရောကျရှိကွလသေညျ။ တိတျပုနျး ကွိတျလုံး လငျမယားတညျး။
ဓမ်မဝါးတငျး ရနျကုနျပွနျလာသညျ။ ကြောငျးတှထေောငျ၊ သငျတနျးတှဖှေငျ့သညျ။ သူတို့ခငျြး အဆကျအသှယျရှိကွသညျ။ နှဈအတနျကွာသညျ့အခါ ဓမ်မဝါးတငျးက အခွားတဈဦးနှငျ့ ပွောငျးတှဲသညျ။ မလေးရှားသူ သိသှားသညျ။ ဖွတျခိုငျးသျောလညျး မရ။ မလေးရှားသူက ဓမ်မဝါးတငျးနှငျ့ လကျထပျကွဖို့အထိ အားခဲထားသညျ။ တရုတျကွီး ပွညျတျောပွနျသှားလြှငျ ကလေးနှငျ့ စညျးစိမျ ကနျြခဲ့မညျ။ ထိုအခါ ဓမ်မဝါးတငျးနှငျ့အတူ နမေညျ။ ဤမြှထိ စိတျကူးယဉျထားသညျ။ ယခုကား အိပျမကျတှေ ပကျြပွယျသှားခဲ့ပွီ။ အိမျမှာအတူနခေဲ့ခွငျးမဟုတျသဖွငျ့လညျး အထောကျအထားမရှိ။ ထိုအခါ မာယာသုံးရသညျ။ ရနျကုနျပွနျလာသညျ။ တညျးခိုခနျးမှာသာ နသေညျ။ သူ့မောငျတျောကို လှမျးချေါသညျ။ စားနကေကြွောငျဖားက တဈကိုယျတညျးလာသညျ။ အခနျးထဲမှာ ဧကော ဧကာယ (နှဈကိုယျတညျး)နသေညျ။ နှမတျောက အလိမ်မာသုံးသညျ။ မောငျတျောက အဟုတျထငျပွီး တကယျလုပျသညျ။ မောငျတျောရခြေိုးနစေဉျ သင်ျကနျးမြားယူကာ ထှကျပွေးသှားပါတော့သညျ။ ဥဒေါငျးမငျး ကြော့ကှငျးမိသှားတော့၏။ ဝတျစရာ ဘာမြှမရှိတော့သဖွငျ့ မှရေ့ာပျေါမှ စောငျအဖွူကွီးကို သင်ျကနျးလိုရုံကာ ထှကျပွေးခဲ့ရလတေော့၏။ ထိုအခါမှ ကာမဂုဏျ ခြိုမွိနျမှနျး သိသှားပုံရလသေညျ။ ထိုနမှေ့ာပငျ ဓမ်မဝါးတငျးက သံဃနာယကရုံး လာရ၏။ မာတုဂါမက အသငျ့ရောကျနလေသေညျ။ အထောကျအထားအားလုံး ခိုငျလုံနေ၍ သံဃနာယကက ဆရာတျောမြားရှမှေ့ောကျမှာ လူဝတျလဲခဲ့ရတော့၏။ မာတုဂါမကနြေပျသှားသညျ။ မလေးရှားပွနျသှားသညျ။ နှဈအတနျကွာသညျ့အခါ ဓမ်မဝါးတငျး သငျတနျးပို့ခနြသေညျ့ သတငျးမြား ပွနျလညျတှရှေိ့ရသညျ။ လူထှကျဖို့ (လူထှကျပွီး သူမကိုယူဖို့) အကွိမျကွိမျပွောသျောလညျး မရသဖွငျ့ တရားစှဲဖို့ ပွငျဆငျရသညျအထိ ရောကျရှိခဲ့ခွငျး ဖွဈပသေညျ။
စာရေးသူနှငျ့ ဓမ်မဝါးတငျးဆကျဆံရေးအနအေထားကို သိရှိသှားသဖွငျ့ စာရေးသူထံ အကူအညီတောငျးခွငျး ဖွဈပမေညျ။ နိုငျငံရေးဘုနျးကွီးဆိုလြှငျ ဤပွဿနာသညျ ဧရာမအကှကျကွီး ဖွဈသှားပလေိမျ့မညျ။ ဘုရားမကျြနှာမြှမထောကျ အားရဝမျးသာ ဖှကွ ဆှကွပလေိမျ့မညျ။ စာရေးသူမှာကား သမဂ်ဂစိတျအပွညျ့အဝရှိသဖွငျ့ ရုံးရောကျဂတျရောကျ အဖွဈမခံပေ။ မောငျတျော နှမတျော ပွနျညှိခိုငျး၏။ လုံးဝ မညှိနှိုငျးကွ။ နှမတျောက ဆိုလာသညျမှာ “အနိုငျကငျြ့ခံရသညျကို စိတျမဆိုးကွောငျး၊ သူ့ကို ထောငျလဲမခခြငျြကွောငျး၊ လူထှကျလြှငျ ကနြေပျပွီဖွဈကွောငျး၊ ဒီလိုပဲဆကျနနေလြှေငျ ထရေဝါဒသာသနာ မသနျ့ရှငျးနိုငျကွောငျး”ပငျ။ တဈဖကျသတျနားထောငျလြှငျကား လေးစားဖှယျ၊ ကရုဏာသကျဖှယျ စကားမြားပငျတညျး။
ဤအမှုလိုငျးပျေါတကျမှာ ကွောကျပါသညျ။ အမဲအကွိုကျ၊ အရဲအကွိုကျ ဖွဈသှားပတေော့မညျ။ သူတဈပါးအတှကျ သာသနာတျောတဈရပျလုံး မကျြနှာပကျြစရာ အရှကျရစရာ ကွုံရနိုငျသောကွောငျ့တညျး။ ထို့ကွောငျ့ မောငျတျောထံ ဖုနျးဆကျ၍ ပွနျခြော့ထားဖို့ တိုကျတှနျးခဲ့သလို နှမတျောကိုလညျး နှဈသိမျ့ပေးကာ အခြိနျဆှဲထားရလသေညျ။ မကွာပါ။ နှမတျောက လူပြံကြျောတဈပါးနှငျ့ အဆကျအသှယျရသှားကာ အမှုတှဲကို ကမ်ဘာအေးထိ အရောကျပို့နိုငျသှားခဲ့ပသေညျ။ ရဲစခနျးမှာလညျး တိုငျခကျြဖှငျ့ထားသောဟူ၏။
မောငျတျောက စာရေးသူထံ ဖုနျးဆကျလာ၏။ တငျပေး တိုငျပေးသူကို အပွဈတငျ၏။ စာရေးသူလိုလုပျရမညျ၊ တဈဖကျသတျမလုပျသငျ့ဟု ဝဖေနျနလေသေညျ။ စာရေးသူထံ မကွာခဏဖုနျးဆကျကာ အကွံဉာဏျတောငျးလသေညျ။ စာရေးသူက လိုလိုလားလား အကွံပေးခွငျး၊ ရှညျရှညျဝေးဝေးရှငျးပွခွငျးတို့ကွောငျ့ ကြေးဇူးစကား အမွဲဆိုပါသညျ။ “ဦးဇငျးရေ ဦးဇငျးရဲ့ သမဂ်ဂစိတျကိုတော့ မလေးစားဘဲကို မနနေိုငျတော့တာပါ။ အရငျတုနျးက ကိစ်စတှအေတှကျလညျး တောငျးပနျပါတယျ”ဟု လှိုကျလှဲစှာ တောငျးပနျသှားပသေညျ။
မောငျတျောပြောကျခကျြသားကောငျးသှားသဖွငျ့ စာရေးသူလညျး ဝမျးသာနလေသေညျ။ အကွောငျးမှာ ဇာတျမွှုပျပွီးနဖေို့ စာရေးသူက အကွံပွုထားသောကွောငျ့တညျး။ သို့သျော မကွာလိုကျပါ။ တီဗီသတငျးနှငျ့အတူ မောငျတျောသတငျးကို သာဝနျကိုယျတိုငျ ဖှငျ့ဟပွောခသြညျနှငျ့ ကွုံလိုကျရတော့၏။ အဓမ်မကငျြ့သညျထငျကာ “အတျောဆိုးတယျ”ဟု မီဒီယာမှာ သာဝနျက ထုတျပွောသညျကိုထောကျလြှငျ သာဝနျကိုယျတိုငျ တဈဖကျသတျစှပျစှဲနမှေနျး သိသာထငျရှားပသေညျ။ ထိုအခါမှ မောငျတျောအဖမျးခံထားရမှနျး သိရှိခဲ့ရလသေညျ။ စိတျမကောငျးပါ။ သာသနာတဈရပျလုံး ထိခိုကျလာတော့မညျဖွဈ၍ စိုးရိမျထိတျလနျ့နရေပသေညျ။ ထငျသညျ့အတိုငျးပငျ နှမတျောထံမှ အထောကျအထားမြား လိုငျးပျေါမှာ ဂယကျရိုကျနပေတေော့၏။ အနီဘုနျးကွီးဖွဈနေ၍ တျောပါသေးသညျ။ မြိုးခဈြရဟနျးတျောတဈပါးဆိုလြှငျ မကျြစိရော နားပါ ပိတျထားရမညျ့အဆငျ့သို့ ရောကျရှိနိုငျပသေညျ။
၎င်းငျးအမှု မုဒိမျးမှုမမွောကျပါ။ သာသနာညှိုးနှမျးအမှုဖွငျ့သာ ၂၉၅ပုဒျမ တပျနိုငျပါသညျ။ အလိုတူသောကွောငျ့တညျး။ စာရေးသူက ရဟနျးအခငျြးခငျြးဖွဈ၍ စောငျ့ထိနျးပါသညျ။ မယုတျမလှနျသာ အကွံပွုပါသညျ။ “လှဲစရာရှိတာ လှဲထားလိုကျတော့၊ လူထှကျသငျ့ရငျ ထှကျလိုကျတော့၊ မထှကျဘဲနခေငျြရငျလညျး ဇာတျမွှုပျပွီးနလေိုကျတော့၊ ကိုယျထငျလညျး မပွမိစနေဲ့” သူကလညျး သဘောတူပါသညျ။ အိန်ဒိယမှာပဲ နတေော့မညျဟု ဆိုလာ၏။ ကောငျးသညျဟု ထောကျခံခကျြပေးလိုကျ၏။ အကွာကွီးပြောကျသှားပွီးမှ ဘာကွောငျ့အဖမျးခံလိုကျရသညျကိုတော့ မသိရှိတော့ပါ။ တရားရုံးလာတိုငျး သတငျးတှေ တကျမလာသညျကိုပငျ ကြေးဇူးတငျမိနပေသေညျ။
အကယျ၍သာ စာရေးသူနှငျ့ ဓမ်မဝါးတငျးနရောခငျြးပွောငျးပွနျဖွဈခဲ့သျော ဓမ်မဝါးတငျးက စာရေးသူလို သမဂ်ဂစိတျ မှေးမွူနိုငျပါမညျလော။ မထငျပါ။ လုံးဝ မထငျပါ။ မွနျမာ့နိုငျငံရေးလောကမှာ မွှောကျစားခံထားရသညျ့ ဘုနျးကွီးတှရေငျထဲ သမဂ်ဂစိတျမရှိပါ။ ထို့ကွောငျ့ ရဟနျးအခငျြးခငျြး ထိုးနှကျတိုကျခိုကျနကွေပါသညျ။ ထရျေကွီးဝါကွီး ဆရာတျောကွီးမြားကိုပငျ ခမျြးသာမပေးကွပါ။ မီဒီယာရှမှေ့ာ မဆိုထားဘိ ဘာသာခွားမြားရှမှေ့ာပငျ ဘုနျးကွီးမကောငျးကွောငျး ပျေါပျေါတငျတငျ ဟောပွောနကွေပသေညျ။ ရဟနျးတဈပါးကို နိုငျငံခွားသားသတငျးသမားမြားက မတရားအနိုငျကငျြ့ လုပျကွံထုတျလှငျ့နသေညျကိုကွညျ့၍ ကိုယျ့ဘကျက နာရကောငျးမှနျးမသိဘဲ ဟားတိုကျလှောငျပွောငျနကွေသူမြားကို တှရှေိ့ရပသေညျ။ ရဟနျးတဈပါးကို ထောငျကစြခေငျြ၍ နိုငျငံရေးသမားမြားနှငျ့ပေါငျးကာ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲလုပျသူမြား၊ ရပျထဲရှာထဲ လကျမှတျလိုကျကောကျနသေူမြားပငျ ရှိပါသညျ။ အခြို့ဆိုလြှငျ ဖမျးမိစရေနျ ဝိုငျးကူဖမျးပေးနသေညျမြားပငျ ရှိပသေညျ။ စာမတတျ ပမေတတျ သူငယျနှပျစားလေးမြား ထိုသို့လုပျသညျကို နားလညျပေးနိုငျခဲ့သျောလညျး မဝတီဘုနျးကွီးလို စာတတျပတေတျ ကမျြးဂနျတတျ ထရျေကွီးဝါကွီးက ထိုသို့ပွုမူနသေညျကို အံ့သွခဲ့ရလသေညျ။ ထိုသူတို့သညျ ဘုရားသားတျောမြား မဟုတျကွလရေော့သလော၊ သို့တညျးမဟုတျ စောငျ့ထိနျးစရာမရှိတော့လောကျအောငျ ရဟနျးသိက်ခာပကျြစီးနရေော့သလော၊ သို့တညျးမဟုတျ ဘုနျးကွီးဘဝနှငျ့ မထိုကျတနျတော့လောကျအောငျ ကိုယျကငျြ့တရားတှေ ပကျြပွားနရေော့သလော၊ သို့တညျးမဟုတျ မပွောသငျ့မပွောထိုကျ မလုပျသငျ့မလုပျထိုကျမှနျး မသိနိုငျလောကျအောငျ အသိတရားတှေ ခေါငျးပါးကုနျရော့သလော ၎င်းငျးတို့သာ သိရှိနိုငျမညျ ဖွဈပတေော့သတညျး။ ဘုရားရှငျမကျြနှာ သာသနာတျောမကျြနှာတော့ ကွညျ့ဖို့ကောငျးလှ၏။ ပါတီဆိုသညျမှာ ယာယီသာဖွဈသညျ။ သာသနာတျောကမှ ထာဝရဖွဈသညျ။ ဤသို့သော အမွငျမြိုး ရှိပုံမရ။ ပုဂ်ဂိုလျစှဲ ပါတီစှဲဖွငျ့ ဘုရားသားတျောအခငျြးခငျြး ပဈမှတျထား တိုကျခိုကျနသေညျမှာ တျောတနျရုံ မိုကျမဲသူမြားပငျ မကြူးလှနျဝံ့သညျ့ ယုတျမာမှုမြိုးပငျ ဖွဈပသေညျ။ ရှကျဖှယျအတိပငျ။
ခုဒ်ဒကနိကာယျ ဣတိဝုတျပါဠိတျော သံဃသာမဂ်ဂီသုတျမှာ မွတျစှာဘုရားက ဤသို့ဤပုံ ဟောကွားတျောမူခဲ့ပါသညျ။
ဧကဓမ်မော ဘိက်ခဝေ လောကေ ဥပ်ပဇ်ဇမာနော ဥပ်ပဇ်ဇတိ ဗဟုဇနဟိတာယ ဗဟုဇနသုခါယ ဗဟူနော ဇနဿ အတ်ထာယ ဟိတာယ သုခါယ ဒဝေမနုဿာနံ။ ကတမော ဧကဓမ်မော? သံဃသာမဂ်ဂီ။
ရဟနျးတို့ သံဃာညီညှတျခွငျးတညျးဟူသော တဈခုသောတရား ထှနျးကားလတျသျော လူနတျမြားစှာ သတ်တဝါအပေါငျး ခမျြးသာရာခမျြးသာကွောငျး ဖွဈလသေတညျး။
(ဣတိဝုတျ။ ၂၀၃။ သြ။ ၁၇။)
သံဃာညီညှတျရေးကို ရှေးရှု၍ အမွငျမတူသျောလညျး အောငျ့အီးသညျးခံရမညျဟု မဆိုလိုပါ။ တရားနညျးလမျးကြ ဝဖေနျခွငျးကို ဘုရားခှငျ့ပွုထားပါသညျ။ နိုငျငံရေးဘုနျးကွီးမြားသညျ ဝဖေနျရေးထကျ စှပျစှဲစျောကားရေး ပွဈမှားကြူးလှနျရေးကို အားသနျနသေောကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။ အခြို့ဆိုလြှငျ မဟာနာယကဆရာတျောကွီးမြားကိုပငျ စိနျချေါနကွေသညျ။ ပရိသတျမပါဘဲ အလှတျတနျးရငျဖှငျ့သညျက သငျ့လြျောသျောလညျး ပရိသတျရှေ့ ဓမ်မာသနပလ်လငျထကျမှ လကျသီးလကျမောငျးတနျး၍ လူမိုကျဆနျစှာ စိနျချေါနသေညျမှာ မကွားဝံ့ မမွငျသာ ဖွဈနပေသေညျ။ သံဃာအခငျြးခငျြး တိုကျခိုကျနမှေ နိုငျငံရေးသူရဲကောငျးဟု ထငျမှတျနကွေသညျလော မပွောသာတော့ပေ။
စာရှုသူအားလုံး သမဂ်ဂစိတျထား မှေးမွူနိုငျကွပါစသေျော…ဝျ။
“စာဖြေသံဃာ အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ (ဆဋ္ဌမနေ့)”